အသဲယားစရာကောင်းလွန်းနေ တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
အသဲယားစရာကောင်းလွန်းနေ တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး
By Cele MinPosted on January 11, 2021 January 11, 2021
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် ။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ်ပါတယ် ။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အ တူ လှပကြည် လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင် ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျ တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး လည်းဖြစ် ပါ တယ် ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယိုလေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ် တွင် အများဆုံးတင်လေ့ ရှိတာလည်းတွေ့ရ ပါတယ် ။ လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှုသူတွေ များပြားခဲ့တာဖြစ် ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
ယခု အခါမှာတော့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် တစ် ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ Tik Tok ဆော့ထား တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ကို တင်ပေး လာတာပဲဖြစ် ပါတယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အလှကတော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစား နေတာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်ပရိသတ် ကြီးလည်း ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး ကို ကြည့်ရှု နိုင်စေရန် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါ တယ် … .
source & photo credit : Cho Zin Win Pyae facebook account
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ ပုရိသေတြရဲ့ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူထားတဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ပါတယ္ ။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အ တူ လွပၾကည္ လင္တဲ့ အသားအေရ ကိုပါ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီက် တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ ။
သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ဗီဒီယိုေလး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံးတင္ေလ့ ရွိတာလည္းေတြ႕ရ ပါတယ္ ။ လတ္တေလာ မွာေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား အလွတရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထားတဲ့ အလန္းစား ပုံေလးကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈသူေတြ မ်ားျပားခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေနရတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ယခု အခါမွာေတာ့ ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် Tik Tok ေဆာ့ထား တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ ကို တင္ေပး လာတာပဲျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ အလွကေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ေနတာအမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီးလည္း ခ်ိဳဇင္ဝင္းျပည့္ ရဲ့ အမိုက္ စား ဗီဒီယိုေလး ကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ေစရန္ ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ … .
Previous post ဆက်ဆီကျတဲ့ အကလေးနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ကိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ ရှယ်ဗီဒီယိုလေး
Next post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုဗြောင်းဆန်သွားအောင် ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်ပြီး လှလွန်းနေတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း